Fedora 34 inosvika neGNOME 40 sekukwezva kwayo kukuru | Linux Vakapindwa muropa
NeChina chapera, Kubvumbi 22, Canonical yakatangwa Ubuntu 21.04. Kwete kuti iyo nhau yanga iine chekuita neicho chatinokuunzira nhasi, kupfuura chokwadi chekuti paifanirwa kunge paine kumwe kugovera kune mukurumbira iyo graphical nharaunda ndeyeGNOME iyo yaifanirwa kunge yakaburitsa vhezheni yayo yekushandisa system mazuva apfuura, asi haina kusvika. Mumwe munhu seni, uyo akashandisa Ubuntu zvakanyanya uye ainyatsoziva nezve Canonical kuvhurwa, akashamisika kutarisa zuva uye kuona zvaiitika. Kwaive kupi Fedora 34?
Huye, hazvizivikanwe kwayanga iri, asi iko iko iko iko zvino: iko kurodha pasi. Uye chokwadi ndechekuti zvaizivikanwa kuti timu yekusimudzira yeFedora yawana mabugs akakomba zvakakwana kuti vambomira zvishoma, asi chekumirira chapera. Mu kusunungura chinyorwa Ivo vanotitaurira nezve avo vakatanhamara matsva, asi zviri pachena kuti chinonyanya kushamisa ndechekuti vanoshandisa GNOME 40.
Fedora 34 Zvakakosha
GNOME 40. Ichi ndicho chinonyanya kukosha shanduko uye Fedora ndechimwe chezvikamu zvishoma zvakatozviwedzera kune yayo inoshanda system.
Wayland nekusarudzika muiyo KDE edition.
Inowanikwa anarch64 mufananidzo nePlasma.
Xfce 4.16 uye LXQt 0.16.0 mune avo akasiyana edhisheni.
Nyowani «kuruka» i3.
PipeWire inotsiva PulseAudio naJack. Izvi zvingasafadza kune vamwe vashandisi, asi, sekune Wayland, iri kutarisa kune ramangwana.
Zstd compression uye BTRSF faira system nekutadza.
ntp yakatsiviwa ne ntpsec.
Dzimwe xorg-x11 mapakeji abviswa.
Yakagadziridzwa mapakeji, akadai seBinutils 2.53, Golang 1.16, Ruby 3.0, BIND 9.16, MariaDB 10.5, Ruby paRail 6.1, uye Stratis 2.3.0.
Fedora 34 ikozvino iripo zvako kusununguka kana kugadzirisa kubva kune yekushandisa system, sezvakatsanangurwa mu Iyi link. Kana uri iwe uchishandisa GNOME 40, iwe uchaona zvimwe zvinhu zvisingawirirane pakutanga, asi kana iwe wafunga kutora chinonyudza chinofanira kushanda sezvaitarisirwa mune distro yakadai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 34 inosvika mushure mevhiki yekunonoka neGNOME 40 sekukwezva kwayo kukuru
Iyo Passage, mhedzisiro yekusanganisa 2D mapuratifomu nehurongwa